Solovava · Jolay, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Solovava · Jolay, 2012
Tantara mikasika ny Solovava tamin'ny Jolay, 2012
Shily29 Jolay 2012
Fahalalahàna miteny24 Jolay 2012
Mifototra amin'ny fanapahan-kevitry ny ONU handray ny fahalalahana miteny ho isan'ny zon'olombelona, nanomboka fanentanana iray antsoina hoe “No temas a Internet” [es] ("Aza matahotra ny Aterineto") ilay ONG “Derechos Digitales” (“Zo Dizitaly”) vao haingana izay, hanairana ny olona amin'ny lanja fototry ny fahalalahana miteny ao anaty aterineto.
Fanambarana Ny Fahafahan'ny Aterineto
Mediam-bahoaka22 Jolay 2012
Amin'izao fotoana izao dia niombona ireo vondrona maro hamorona Fanambarana ny Fahalalahan'ny Aterineto, izay iray amin'ireo mpanao sonia voalohany indrindra ny Global Voices Advocacy. Hatreto, nosoniavinà fikambanana sy orinasa mihoatra ny 1300 io Fanambarana io ary mbola mitombo izany.
Fanentanana Ho An'ireo Mpitoraka Bilaogy Syriana
Syria20 Jolay 2012
Mitombo isanandro ny isan'ireo vahoaka mpanao gazety maty na voasambotra tany Syria. Misy fanentanana iray momba ilay mpitoraka bilaogy Hussein Ghrer--mikatsaka ny hanaitra ny sain'ny maro amin'ireo raharaha mafana mahazo ilay mpitoraka bilaogy.
Sodana : Mpitoraka Bilaogy Iray Hafa Indray No Mbola Voasambotra
Mediam-bahoaka02 Jolay 2012
Araka ireo tatitra farany, maro ireo Sodaney mpitoraka bilaogy sy mafana fo voasambotra tato anatin'ny andro vitsy...Na dia voasambotra aza i Sanosi sy ireo mafana fo, mpitoraka bilaogy ary mpanohitra maro hafa, tsy ho tahaka izany ireo mpanohitra amin'ny #SudanRevolt.